Shiinaha Fiberglass-xidhkii Roven-saareyaasha iyo shirkado cusub | Beihai Fiberglass
1.Bidirectional dhar sameeyey by interweaving meertada tooska ah.
2.Waxay u dhigantaa nidaamyo badan oo cusbi ah, sida polyester unsaturated, vinyl ester, epoxy iyo phenolic resins.
3.Widness loo isticmaalo wax soo saarka doomaha, maraakiibta, diyaaradda iyo qaybaha baabuurta iyo iwm.
E-Glass-ka tolmo wanaagsan ee Govings waa dhar laba geesood ah oo lagu sameeyay isweydaarsiga xargaha tooska ah.
E-Glass-ga xidhka rovings waxay la jaan qaadayaan nidaamyo badan oo dumin ah, sida polyester unsaturated, vinyl ester, epoxy iyo phenolic resins.
E-Glass-ka tolmay Roving waa xoojinta waxqabadka sare ee si ballaadhan loogu isticmaalo gacanta iyo hawlgallada robot ee wax soo saarka doomaha, maraakiibta, diyaaradaha iyo qaybaha baabuurta, qalabka guryaha iyo isboortiga
1.Warp iyo weft rovings waafaqsan a barbar iyo flat
hab, taasoo keentay xiisad isku mid ah.
Fibirro isdaba-joog ah oo iswaafajiya, oo leh cabbir sare
xasilloonida iyo fududeynta qabashada.
3.Awood wanaagsan oo caarya ah, dhakhso leh oo dhammaystiran qoyan ee xarkaha,
taasoo keentay wax soo saar sare.
Hufnaan hufan iyo xoog sare ee wax soo saarka farcan.
Cufnaanta Dhirta Dhammaadka / cm
Cufnaanta Weft Dhammaadka / cm
Miisaanka Miisaanka g / m2
Mawduuc guban kara (%)
Wareeg kasta oo tolmo leh ayaa lagu dhaawacaa tuubo waraaq ah oo dhexroorkeedu dhan yahay 76mm, rooga duubkuna wuxuu leeyahay dhexroor dhan 220mm. Duubka wareega ee dharka lagu duubay ayaa lagu duubay filim caag ah ， ka dibna lagu ridayaa sanduuq kartoon ah ama lagu duubayaa warqad gacmeed. Duubku si siman ayaa loo dhigi karaa. Gaadiid ahaan, duubka ayaa si toos ah loogu ridi karaa khaanad ama baallooyinka.
Haddii aan si kale loo qeexin, Waa in lagu keydiyaa meel qalalan, qabow iyo roobab-diidmo. Waxaa lagugula talinayaa in heerkulka qolka iyo huurka waa in had iyo jeer lagu hayaa 15 ℃ ～ 35 ℃ iyo 35% ～ 65% siday u kala horreeyaan.
Gaarsiinta: 20 maalmood kadib rasiid rahmad ah
Bixinta: T / T
Xirxirida: 40kgs / duub, 1000kgs / sariirtaada.
Hore: E-galaas uruuriyay Roving Waayo, casting Centrifugal Price - jumlada Price Roving Glass Fiber Yarn
Xiga: Fiberglass Wall Cover Cover Cadka
Xadhkaha La Gooyey Oo Qoyan